संसारकै सबैभन्दा ठूलो बैंक ICBC : कस्तो छ अवस्था ? – Banking Khabar
संसारकै सबैभन्दा ठूलो बैंक ICBC : कस्तो छ अवस्था ?
बैंकिङ खबर । आईसीबीसी अर्थात इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना संसारकै सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । १ जनवरी १९८४ मा स्थापना भएको यो बैंक औद्योगिक एवम् व्यवसायिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ । यद्यपि, यसले व्यक्तिगत प्रकारका कर्जाहरु पनि उपलब्ध गराउँछ । २८ अक्टोबर २००५ मा यो बैंकलाई जोइन्ट स्टक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरियो र २७ अक्टोबर २००६ देखि सांघाई स्टक एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्ज अफ हङकङमा सूचिकृत गरियो ।
पूर्ण रुपमा ग्राहक केन्द्रित सेवाहरुमा जोड दिने यो बैंकले विकासका कार्यहरुको सुरुवातमा सहयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । ६२ लाखभन्दा बढी कर्पोरेट ग्राहक र ५७ लाख व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई आईसीबीसीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले आफ्नो सेवा र सुविधामा क्रमशः विकास र विस्तार गर्दै लगेको छ । हाल यो बैंकले ४५ वटा मुलुकमा आफ्नो सेवाहरु विस्तार गरिसकेको छ ।
चिनको बेइजिङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आईसीबीसीको लगानीमा १६ हजार तीन सय ९४ स्वदेशी संस्थाहरु संचालनमा छन् भने ४२६ ओभरसिज कम्पनीहरु संचालनमा छन् ।